वर्षौंदेखि बे’कार फ’लिएको सि’लाई मेसिनको गो’प्य घ’र्रा खो’ल्दा जे देखियो … – List Khabar
Home / समाचार / वर्षौंदेखि बे’कार फ’लिएको सि’लाई मेसिनको गो’प्य घ’र्रा खो’ल्दा जे देखियो …
admin October 30, 2021 समाचार Leaveacomment 69 Views
अमेरिकाको को’लम्बिया सहरमा बस्ने क्या’थी अ’र्नाल्डले ५० वर्ष पुरानो सि’लाई मेसिन कि’न्दासम्म उनलाई पनि थाहा थिएन त्यही मे’सिनका कारण उनी नि’कै चर्चित बन्नेछिन् ।
जीवनमा हामीसँग कहिले हामीले कल्पना नै नगरेका चीज आउँछन् भन्ने सोच्न सकेत सकिँदैन ।
साउथ क्या’रोलिनाको को’लम्बियाकी क्या’थी अ’र्नाल्डने स्थानीय पसलबाट त्यो ५० वर्ष पुरानो सि’लाइ मे’सिन किनेकी थिइन् । पैसा जम्मा गरेर क्या’थीले त्यो मे’सिन कि’नेर घर लिएर आइन् । यो मे’सिनको ड्र’अरमा केही पुराना कपडा र एउटा कैं’ची राखिएको थियो ।
जब क्या’थीले ड’ङअर ब’न्द गर्ने को’सिस गरिन् उनलाई यस्तो लाग्यो कि त्यहाँ बीचमा केही चीज अ’ड्किएको छ । जब उनले ड्र’अरलाई मेसिनबाटै बाहिर नि’कालिन् उनले मे’सिनमा लु’काएर राखिएको निकै सुन्दर चीज भेट्टाइन् ।
यो एक चीजका कारण क्या’थी निकै चर्चित भइन् । त्यहाँ एउटा पु’रानो चिठी थियो ।यो चिठी अमेरिकी सै’निक वा’ल्टर स्मि’थले आफ्नी श्रीमती रो’बर्टालाई लेखेका थिए । दोस्रो वि’श्वयु’द्धमा ख’टिएका वा’ल्टरले रो’बर्टालाई आफूले कति माया गर्छन् भन्ने कुरा चि’ठिमा ब’यान गरिएको थियो ।
यो चिठि पढेपछि क्या’थीले वा’ल्टर र उनको जीवनबारे एक स्थानीय समाचार च्या’नलको सहयोगमा खोजी सुरु गरिन् ।अन्ततः क्या’थीले यो जोडीको बारेमा पत्ता लगाइन् । यो जोडीको कुनै सन्तान त थिएनन् तर आफ्नो मायाका कारण छिमेकमा निकै प्रसिद्ध थिए । वा’ल्टर यु’द्धमा श’हीद भएका थिए र यो चि’ठि भे’टिनुभन्दा पहिले उनकी श्रीमतीको पनि मृ’त्यु भइसकेको थियो। एजेन्सी
Previous लोकसेवाले ठूलो संख्यामा कर्मचारीको माग गरेर विज्ञापन खोल्दै, मिति समेत तोकियो !
Next भोलि कार्तिक १४ गते आईतबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !